इन्दिरा गान्धीले नेपाललाई समेत गाभ्नेबारेमा सोचेकी थिइन् – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated May 13, 2019 34 0
सिक्किम नेपाली माझ परिचित नाम हो । सिक्किम यहाँको राजनीतिक भाष्यमा धेरै प्रयोग हुने गर्छ । आखिर त्यो किन हुन्छ ? यसको इतिहासमा नेपाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिएको छ । ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतको संस्थापनले सन् १९५० एकै वर्ष नेपालसँगै भुटान र सिक्किमसँग ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ गर्यो । ती तीनमध्ये एक सिक्किमलाई भारतले सन्धिको मर्म विपरीत आफूमा विलय गरायो